Xirfadlaha dhalada ah ee farsamaynta qoto dheer leh oo leh adeeg la habeeyey oo lagu bixiyo shuruudo kasta oo gaar ah oo ku saabsan cabbirka, cidhifyada, qodista, xanaaqa, daabacaadda iyo daaweynta dusha sare.
In ka badan 10 injineero karti leh oo leh in ka badan 5 sano oo waayo-aragnimo ah si ay u hubiyaan alaabtaada in Saida Glass ay ku siiso kabaal sare iyo waxqabadka xasilloon ee suuqa.
Buuxi khadadka farsamaynta muraayadda halka joogsiga ah oo leh shaqaale xirfad leh, SOP la safeeyey iyo kormeero tayada khadka ah. Ma jiro MOQ iyo 100% hubinta shixnad kasta.
Ma garanaysaa waxa uu yahay qalin dhoobada heer-kulka sare ee daabacaada dhijitaalka ah?
Muraayadu waa shay salka aan nuugi karin oo dusha siman leh. Markaad isticmaalayso khad dubista heerkul hooseeya inta lagu jiro daabacaadda shaashadda, waxaa laga yaabaa inay dhacdo dhibaato aan degganayn sida ku dheggan hoose, caabbinta cimiladu hooseyso ama khadku wuxuu bilaabaa inuu dilo, midab iyo ifafaale kale. Khadka dhoobada oo...
Right Xuquuqda daabacaadda - 2010-2025: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.
Glass Waayo Laydhka Cover , Tallaabada Glass Waayo Laydhka, Home Appliance hagaajiyey Glass, cover Glass, Print Ceramic Cover Glass , Smart Watch Cover Glass .